वामीमा स्थानियबाट कुटाई खाएका युवा प्रहरी हिरासतमा, असई भन्छन् भनाभन मात्र भाको हो – Gulminews
Home/अपराध/वामीमा स्थानियबाट कुटाई खाएका युवा प्रहरी हिरासतमा, असई भन्छन् भनाभन मात्र भाको हो
वामीमा स्थानियबाट कुटाई खाएका युवा प्रहरी हिरासतमा, असई भन्छन् भनाभन मात्र भाको हो
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ पुष १९, बुधबार २०:४२ मा प्रकाशित
गुल्मी, पुस १९ । आज दिउँसो गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका भित्र पर्ने वामीटक्सार वजारमा एक दलितलाई कुटपिट गरी प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको छ । मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर ८ वामी मैदान निवासी वावुराम परियारलाई वामीटक्सार बजारका संसार शाक्य लगायतले कुटेको बताईएको छ ।
यसरी सुरु भयो कुटाई
परियार माथी घर जानका लागि वामीटक्सार बजारको वसपार्कमा दिउँसो जिपको टिकट काटेका थिए । साथमा उनकी छोरी सहित ६ जना थिए । साढे तिन वजे हिँडनु पर्ने जिप परियारले ढिला गरे पछि टिकट काउण्टरका सन्तोष शाक्य रिसले चुर हुँदै फोनमा वोलाईरहेका थिए ।
परियार ढिला गरी आए । शाक्यको हप्काई सहन नसके पछि उनले पनि मुख छाड्न थाले । परियारले भने, ‘ के गरुँ त नास्ता गर्ने क्रममा ढिला भयो, ठिकै छ तपाईको गाडीमा नभए अरुको गाडीमा जाउँला ।’ त्यो भन्दै परियार छतमा राखेको आफ्नो समानहरु झिक्न थाले । त्यस पछि सुरु भयो शाक्य बन्धुहरुको उनि माथी लछारपछार ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार परियारलाई निर्घात कुटेको देख्ने धेरै छन् । प्रत्यक्षदर्शी भन्छन कुटपिट गरी सके पछि कुटपिट गर्नेहरुले नै मदिरा सेवन गरेको भन्दै वामी प्रहरीलाई फोन गरेर उनै पिटाई खाने व्यक्तिलाई अहिले प्रहरी हिरासतमा पुराईएको छ ।
परियारकी २४ वर्षिया छोरी सिता परियारले भनिन्, “वुवा र हामी होटलमा नास्ता गर्दै थियो । काण्टरबाट अत्ताउँदै हुनुहुन्थ्यो । पछि हामी काउण्टरमा आउँदा वुवालाई गाली गरे । त्यस पछि वुवाले ठिकै छ अर्को गाडीमा जाउँला भनेर समान झिक्न के खोज्दै हुनुहुन्थ्यो काउण्टरका संसार शाक्य, उहाँका दाजु सुदर्शन शाक्य र उहाँका कान्छा भाई सन्तोष मिलेर एकाएक कुटपिट गर्नु भयो ।”
आरोपित शाक्य बन्धुहरुसंग सम्पर्क राख्दा गाडीमा चढ्न ढिला गरेको र मदिरा सेवन गरी मुख छाडेकोले सामन्य लछारपछार गरिएको बताए । त्यस प्रहरी चौकीका असई मुक्ति पुनले भने उहाँहरुले कुटेको होईन सामान्य भनाभन मात्रै भएको जिकिर गरे ।
संगै रहेका मुसिकोट ८ का वडाध्यक्ष नारायण सापकोटाले परियारलाइ निर्घात कुटेको देख्ने त्यति धेरै मान्छे हुँदाहुँदै पनि यहाँका असईले ढाँटेर एउटा कुटाई खाएको दलितलाई अन्यायमा पार्न मिल्छ ? भन्ने प्रतिकृया दिए । उनले भने, ‘यहाँ त अचम्म भयो जसले गोँदाई खाएको छ उसैलाई पो प्रहरीले पक्रेर राखेको छ । अहिले मिलौं भनिएको छ तर हामी अहिले मिल्न चाहन्नौ, मदिरा सेवन गरेको मान्छे छ भन्दैमा कुटन–मार्न पाईन्छ र ? वडा नम्वर ७ का वडाध्यक्ष प्रकाश काफ्ले, वामीकै वासीन्दा रामबहादुर वोहरा लगायतले पनि यस घटनको घोर निन्दा गरेका छन् ।
उता कुटाईमा संलग्नको आरोप लागेका वामीका समाजसेवी सुदर्शन शाक्यले भने, “त्यसो भए आउनुहोस तपाईहरु र यहाँको जाँडरक्सी नियन्त्रण गरी दिनुहोस् ।” फेरी जाँड रक्सी नियन्त्रण मान्छे कुटेर हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “कुटिएको चाँही होईन लछार पछार चाँही गरिएको हो ।”
स्मरण रहोस चोरी र ठगी काण्डमा परेका एकजना युवा महेन्द्र बिकलाई त्यसै वामीमा दुई वर्ष अघि बाँधेर कालोमोसो दलेर निर्घात कुटपिट हुँदा पनि त्यहाँका प्रहरीले सुरक्षा दिएको थिएन ।